‘आँधी तुफान–२’ ल्याउँदै मौनता श्रेष्ठ
काठमाडौं । निर्माता मौनता श्रेष्ठले चलचित्र ‘आँधी तुफान–२’ निर्माण गर्ने भएका छन् । मौनताले ०६१ सालमा महेन्द्र बुढाथोकीको निर्देशनमा चलचित्र ‘आँधी तुफान’ निर्माण गरेका थिए । सो फिल्मले ब्यावसायिक सफलता हासिल गरेको थियो । लकडाउन अबधिभर आफूले ‘आँधी तुफान–२’ को
२ असार २०७७, मंगलवार १५:३६	२ असार २०७७, मंगलवार १५:३६
सुशान्तले आत्महत्या गर्नुको दोष आफूलाई दिँदै करण जोहर
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको असामयिक निधन पछि पुरै बलिउड उद्योग शोकमा डुबेको छ । विगत ६ महिनादेखि डिप्रेसनबाट ग्रसित सुशान्त आइतबार बिहान आफ्नै निवासमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए । उनले आत्महत्या गर्नुको कारण अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन
१ असार २०७७, सोमबार १४:०७	१ असार २०७७, सोमबार १४:०७
४५ औँ वर्षमा प्रवेश गरे हाँस्यकलाकार जितु नेपाल
काठमाडाैं । नेपालका चर्चित हाँस्यकलाकार जितु नेपाल उर्फ मुन्द्रेको आज जन्मदिन परेको छ । वि. सं. २०३२ असार १ गते सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिएका उनी आजबाट ४५ वर्षमा लागेका छन् । ‘ट्वाक्क–टुक्क’ नामक हाँस्य टेलिश्रृङ्खला मार्फत कला क्षेत्रमा प्रवेश गरे पनि उनलाई
१ असार २०७७, सोमबार १२:४९	१ असार २०७७, सोमबार १२:४९
काठमाडौं । सरकारले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा निर्देशक दयाराम दाहाललाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाहाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । यस अघि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तीन जनाको नाम
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार २२:०४	२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार २२:०४
बलिउड बादशाह अमिताभ बच्चन र उनकी धर्मपत्नी जया बच्चनको विवाह भएको ४७ वर्ष पुगेको छ । यसै मौकामा अमिताभले सोसल मिडियामा एक पोष्ट सेयर गर्दै आफ्नो कुन परिस्थितिमा विवाह भएको थियो भनी रहस्य खोलेका छन् । पोष्टसँग आफ्नो विवाहको थुप्रै
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १७:२७	२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १७:२७
काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयले दर्खास्त दिने मध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । मन्त्रालयले निर्देशक दयाराम दाहाल, नायक भुवन केसी र संस्कृतिकर्मी
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०८:२४	२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०८:२४